मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, गृहमन्त्री हुने दाउमा रहेका रायमाझीले के पाउलान ? | Ekata News
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, गृहमन्त्री हुने दाउमा रहेका रायमाझीले के पाउलान ?
एकता न्यूज / पुस १०, २०७७ - शुक्रबार
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बिरोधमा ७ जना मन्त्रिले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेका मन्त्रालयमा आज नयाँ मन्त्रि चयन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सञ्‍चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अबको पहिलो काम मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने बताएका थिए । सोही बमोजिम आज मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
अब मन्त्रिपरिषद विस्तारको क्रममा टोपबहादुर रायमाझीले सबैभन्दा ठुलो भाग पाउने आंकलन गरिएको छ । रायमाझीलाई गृह मन्त्रालय दिने तयारी ओलीले पहिल्यै गरेका थिए । तर हालका गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले पार्टीमा ओलीलाई साथ दिएपछि अब रायमाझीले गृह नपाउने संभावना रहेको बताइएको छ ।
रायमाझीले बुधबार केहि समर्थक र पत्रकारहरूलाई आफू शक्तिशाली मन्त्रालयमा जान लागेको बताउंदै कार्यक्रममा आउन आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै पूर्वमाओवादीकै मणि थापाले पनि एउटा मन्त्रालय पाउने गरी बालुवाटारमा सहमति गरेका छन्। उनले पनि प्रचण्डको साथ् छाडेर ओली पक्षमा देखिएका छन् । त्यस्तै केपी ओलीका एकदम प्रियपात्र महेश बस्नेत पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन...